Sei. edu backlinks inogona kuchinja nzvimbo yako SEO?
Edu backlinks inonzi inonyanya kukosha sezvainobva kune dzimwe nzvimbo dzakavimbika uye dzine mbiri. Inowanzoshandiswa nemakoroji, masunivhesiti, zvikoro zvepamusoro, uye mamwe masangano edzidzo. Sezvavanounza kukosha kune vashandisi, Google inovaonga zvikuru uye yakakwirira kumusoro paSERP.
Zvinotora nguva yakawanda uye miitiro yekuwana mawaniro kubva kune mamwe mawebsite. Zvisinei, kubatsirwa ndeyokuti iwe haufaniri kunge uri pachena kuti uri nyanzvi mune imwe nzvimbo yekudzidzisa kuti uwane backlink kubva kune iyo nzvimbo yako.
Kana uri kutambura kuti uwane unhu. edu backlinks kunzvimbo yako, iyi chinyorwa chichave chakakosha kwauri sezvaunounganidza pano maitiro ose ekutengesa mabhizimisi ekutengeserana.
Zvakanakira. edu backlinks
Google inokoshesa zvikuru edu edu. domains uye inotevera ichakwevera nzvimbo yako seinonyanya kugadzirisa kana iwe ukawana kunze kwemasangano kubva munzvimbo idzi;
Yese yewebhu yepamusoro yepamusoro inobva kune yepamusoro uye inowana kukosha kune vashandisi;
Kuisa chikwata chako pa. edu domain, iwe uchawana zvakawanda zvinotarirwa mumigwagwa zvichange zviri nyore kutendeuka;
Ita wehuwandu hwehuwandu uye chokwadi.
Nzira yekuvaka sei unhu. edu backlinks?
Kuti ugadzirise hukama hwakanaka nemayunivhesiti uye zvikoro zvepamusoro, unogona kupa vadzidzi vavo zvipo uye zvidzidzo.
Unogona kutanga kutora webhu rekutsvaga kwemasangano ezedzidzo kuburikidza neGoogle kana dzimwe nharaunda dzenharaunda dzinogona kukupa ruzivo rwakakosha kumubvunzo wako. Iva nechokwadi, sangano rezvidzidzo raunosarudza rine vazhinji vevashanyi kana kuti kukumbira kana yunivhesiti kana chikoro ine dunhu. Dzokera kune avo vane mutariri wezvizvarwa izvi. Kubva pamashandiro enyu kana zvigadzirwa zvamunotengesa, munogona kupa. edu mashizha ane zvipo zvakasiyana mukudzorera kumashure. Semuenzaniso, kana iwe uchitengesa midziyo yemitambo, unogona kupa shanduro kuvadzidzi vanobudirira mune zvemitambo. Kana iwe uchikwanisa kuwana backlink yakasara kubva. edu web source iyo inenge isingasviki pamusika wako wekutengeserana, iwe unowedzera kukoshesa purogiramu yako ye backlink.
Ipai zvidzidzo zvevadzidzi
Kana iwe uchitengesa zvimwe zvigadzirwa zvinogona kubatsira vadzidzi mune zvavanoda zuva rega rega, unogona kuedza kuwana backlink mukudzoka kwezvidzidzo. Ipa vadzidzi vane zvirevo zvakasiyana uye zvipo. Zvigadzirwa zvako zvinogona kumira kana mapurogiramu emapurogiramu anogona kubatsira vadzidzi mukutsvaka nzira yavo. Iwe unoda kubvunza chikoro cheyunivhesiti kuti ubudise chipo chako pawebsite yekambani.
Gadzira zvinyorwa zvichange zvichida kuvadzidzi
Hauzogadziriswi zvakanaka, kunyanya kubva. edu sites, kana webhutiro yako yehutori ine zvakakosha kune vaverengi. Hapana munhu anoda kuverenga zviri mukati memajeri zvechokwadi.
Mazhinji emasangano ekudzidzisa anochengetedza mabhuku kune vadzidzi. Iwe unogona kukumbira kuti ubudise zvinyorwa zvako zvakakodzera uye zvakatsvakurudza zvakanyorwa pamusoro pebhuku rino kana kutumira mhinduro dzakachenjera kumibvunzo yevadzidzi Source .